Vista's Colorful Planet: အချစ်အကြောင်း
အမလည်းအဲဒီ သီချင်းလေးကို ကြိုက်တယ်...
ပြီးတော့ အချစ်အကြောင်းကို လိုရင်း တိုရှင်း ရေးပြထားတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်...
တယောက်ဘေးမှာ တယောက်အမြဲရှိနေကြတယ် ဆိုတာလေးကို ကြိုက်တယ်... အသက်ထက်ဆုံး အတူတူရှိနေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ် ညီမ...း))
မိန်းမတွေကို မချစ်တတ်ဘူး ကြောင်လေးတွေလောက်လဲ အရေးမစိုက်တတ်ဘူး အဲတာတို့ ပျော့ကွက်
ထိမိတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးကျေး နော :)
ရည်းစားဘ၀တုန်းကလည်း t0 B with You ဆိုပြတယ်ဆိုလားဖတ်ဖူးတယ်။ အခုလည်း Nothing But Love များဆိုပြလိုက်လေသလား။ ဒီလူကြီးက Mr.Big အားကိုးပုဆိန်ရိုးကြီးပါ။ ဟမ်။
ကိုဇီးပြား ဘယ်လိုသိ . ဟမ်
Visit back you and please let me take your link too. Thanks.
အစက သစ် သူငယ်ချင်းဆိုတော့ ဗစ်ကို မိန်းကလေးထင်တယ်
နောက်တော့ ဘလောခ် လာဘတ်တော့ ယောက်ျားလေးထင်တယ် ဘာ့ကြောင့်လဲ မသိ ကားဓါတ်ဆီ ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်မယ် ကုိုယ်က ကားနဲ့ ကိုယ် လားလားမျှမဆိုင်လို့ သတ်မှတ်တယ် ကိုယ့် က မိန်းကလေးဖြစ်တယ်
ခု ကိုကိုတင်ဇာ ဆီရောက်တော့ သူသူ မမဗစ် ဆိုလို့ ပရိုဖိုင်းပြန်လာကြည့်တော့ မိန်းကလေး ဖြစ်နေတယ်